भाग्यमानीले मात्रै भेट्छन् पाँच पात भएकाे बेलपत्र, भगवान शिवलाई चढाउँदा कस्तो फल मिल्छ? – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /Entertainment/भाग्यमानीले मात्रै भेट्छन् पाँच पात भएकाे बेलपत्र, भगवान शिवलाई चढाउँदा कस्तो फल मिल्छ?
भगवान् आशुतोष जगत्का पिता शिवकाे पुजाका लागि रुद्रा अभिषेक तथा बिल्वपत्रकाे प्रथमथान रहिआएको छ । शास्त्रमा उल्लेख भएअनुसार भगवान् शिवका लागि यदि एउटामात्रै बेल्वपत्र जढएमा काेटी कन्या अर्थात् एककराेड कन्यादान गरेकाे जति फल प्राप्त हुने उल्लेख गरिएको छ ।
सम्पूर्ण सिद्धिहरुकाे आश्रय थल भनेकै बेल्व पत्रकाे वृक्ष हाे । यसकाे वृक्षकाे वरिपरि बसेर कुनै पनि प्रकारका स्ताेत्त्र पाठ या जप गरेमा यसकाे फलभन्दा धेरैगुणा वृद्धि हुनुका साथै शीघ्र रुपमा कार्य सिद्धिहुने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसकाे फल तथा समिधा हवन गरेमा लक्ष्मीकाे आगमन हुने र बेल्वपत्र सेवन गरेमा दीर्घकालीन राेग समेत निकाेहुने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ । बिल्वपत्र सबै देवी देवता हरुलाई चढाउन सकिने विधान शास्त्रमा छ । यदि साधकले स्वयं बिल्वपत्र टिप्नु परेमा यस मन्त्र पढेर टिपेमा कुनै प्रकारकाे दाेष नलाग्ने भनेर भनिएकाे छ ।
गृहणामि तव पत्राणि शिवपूजार्थमादरात्।।’
बिल्वपत्र कहिले टिप्नु हुदैन :- लिंगपुराणका अनुसार चतुर्थी, अष्टमी,नवमी,चतुर्दशी, अमावाश्य, संक्रान्ति तथा साेमबार बेल्वपत्त्र टिप्नु हुदैन । शिव लगाएत देवी देवता हरुका लागि बेल्वपत्र अति प्रिय भएकाले जुन दिन टिप्नु हुदैन त्याे भन्दा अधिल्लाे दिमा नै टिपेर राख्नु पर्ने नियम रहेकाे छ ।
याे शक्तिशाली वृक्ष भएकाले निशेध गरिएकाे तिथिमा यसकाे शक्तिक्षिण हुने हुदा तिथिअनुसार नै टिप्नु पर्ने नियम रहेकाे छ । बिल्वपत्र कहिल्यै अशुद्ध तथा बासि हुदैन एकपटक चढाइ सकेपनि पुन पखालेर चढाउन समेत मिल्ने कुरा स्कन्द पुराणकाे यस श्र्लाेमा उल्लेख गरिएको छ ।